कानून: शराबबाट सहमति स्पष्ट छ | इनाम पुरस्कार
कानुन व्यवहारमा के हो?
रात के हुन्छ भने वा के हुन्छ वा के हुन्छ वा दुवै जवानहरू पिउनको लागि एकदमै बिर्सन्छन्? जब अवरोधहरू तल छन् र तिनीहरू बिन्ड गर्न चाहन्छन्, कसरी कति टाढा जान सक्छ? कहिले होइन 'शायद' हो? खेलका नियमहरू के हुन्? रोमांसले कहिलेकाँही यौन परिवर्तन गर्छ? कसले निर्णय गर्छ?
सहमति र रक्सी
मैले एक 17 वर्षीया महिलालाई एक हल्का मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको साथ एक समृद्ध पृष्ठभूमिबाट साक्षात्कार गरे जुन सहमति र स्त्रीवादमा कक्षाहरूमा भाग लिईयो। हामी उनको जनवरी बुलाउछौ। उनले मलाई विश्वास गरे कि उनी "उनको सीमा जान्दथे" रक्सी संग। उनीहरूले के भनेर सोधे कि उनीहरूले भने, "म कहिल्यै नराम्रो हुनेछ कि म बाहिर जान्छु"। उनले भनेका थिए कि उनीहरूले साप्ताहिकमा पार्टीलाई बाहिर जाने भन्दा अघि "अघिल्लो" र अप्रत्याशित, विभिन्न पुरुषहरु संग आकस्मिक यौन थियो। उनले स्वीकृत गरे कि उनीहरु उनीहरुसँग यौन सम्बन्ध गर्थे भने उनी विषाक्त भएनन् भने। न त उनी सेक्सको प्रकारको लागि सहमत भएकी थिईन्, जसमा कुनै नराम्रो गुदा सेक्स सहित उनीहरूले अक्सर माग गर्थे। यद्यपि उनले भने कि उनीहरूलाई उनीहरूको परिस्थितिमा यौन सम्बन्धको लागि 'प्रोत्साहन' को लागि एक मानिसलाई दोषी ठहराउँदैन किनभने उनी पिउने थिए र उनीहरु यौनसम्पर्क भए। उनको मनमा उनले भन्यो कि त्यो सहमति दिइरहेका थिए भले पनि उनले अर्को दिन पछुतो दिए।
एक वयस्क को लागि, 'शराब संग एक सीमा को जानन' मतलब हो कि स्वतंत्रता संग सहमत गर्न को लागी नियंत्रण खोने को मतलब हुन सक्छ। व्याख्याको त्यस्ता भिन्नताले बलात्कारको लागि परीक्षणमा न्यायको लागि समस्याको मुद्दा बनाउँछ। मैले जनलाई सोधें किन उनले गर्भनिरोधकहरु को प्रयोग गरेर गर्भावस्था या यौन संचारित संक्रमण को जोखिम ले लिया। उनले जवाफ दिए कि उनको बुबा रिस उठाइदिन्छ भने थाहा पाए कि उनको सानो केटी सेक्स भएको थियो। उनले भने गर्भवती भए भने, उसले भर्खरै गर्भपात गर्दथ्यो, उसको आमाले उसलाई मदत गर्थे। त्यसैले यस विषयमा स्कूलमा वार्तालापको बावजुद उसलाई तिनको आमाबाबुले प्रतिक्रिया पाउनेछ र साथीहरूको दबाबले धेरै पिउन सक्छ र तिनीहरु लाई स्वास्थ्य जोखिमको आफ्नै अनुमानको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण थियो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण थियो। यस्तो जोखिम-किशोरीको मस्तिष्क मस्तिष्क हो।
यद्यपि यो बिना सहमतिको गुदा सेक्सको लागि अपराध हो, महिलाहरूले अक्सर गम्भीर असर गर्छन् कि उनीहरूले यसलाई मार्न सक्छन्। अनुसन्धान 16-18 उमेरका युवाहरु बीच आजकल धेरै सामान्य अभ्यास गर्नुपर्दछ जुन गुणा सेक्समा संलग्न हुन बलियो 'अनुयायी' हुन्छ। युवा पुरुषहरू र महिलाहरूले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीलाई महत्त्वपूर्ण प्रेरकको रूपमा चित्रण गर्छन्। यद्यपि उनीहरूलाई थाहा छ कि "महिलाहरूलाई धेरै पीडादायी" हो, जवान पुरुषहरूले अझै पनि "अनुकरण" गर्न सकेसम्म उनीहरूलाई गर्न सकेसम्म यथार्थलाई धक्का दिए। यद्यपि जवान पुरुषहरू वास्तवमा आफैंको आनन्द उठाउन सक्दैनन्। यो 10 मिनेट अडियो साक्षात्कार नेतृत्व शोधकर्ताको साथ उनीहरुको निष्कर्षहरु को बारेमा अधिक बताउँछ। केवल एक महिलाले यसलाई मजा लिने स्वीकार गरे। केही युवा पुरुषहरूको लागि, "भूरा पखेटाहरू" कमाउने कुडहरू बलियो लक्ष्य हुन सक्छ।
आत्म-नियन्त्रण महिला र पुरुष दुवैको लागि राम्रो समय मा एक चुनौती हो, तर विशेष गरी पार्टी दृश्य मा किशोरहरु बीच। जबसम्म सीमा निर्धारण गर्ने योजना अग्रिममा होशियार निर्णय गरिएको छ भने, यौन रोमांचहरू गणना हुँदा बलियो अनुकरणको प्रतिरोध गर्न कठिन हुनसक्छ र जब हामी यौन आकर्षक र 'सुन्दर' रूपमा देख्न चाहन्छौं।
यद्यपि सहमतिमा रक्सीको प्रभावको वरपर बढी शिक्षा र व्यायामको सामनामा कसरी आक्रामक हुन आवश्यक छ। शिक्षण 'डेटिङ कुञ्जी' र कसरी अर्को व्यक्तिको सीमालाई सम्मान गर्ने एक ठूलो अग्रिम हुनेछ। युवाहरूको आचरणका थुप्रै सर्वेक्षणहरूले यस प्रकारको शिक्षाको लागि बुझेका छन्।
<< कानूनमा के छ? Sexting >>